Etu ị ga - esi edozi ọwa Youtube ma kpochapụ ya! | Martech Zone
Etu ị ga - esi edozi ọwa Youtube ma kpochapụ ya!
Fraịdee, June 17, 2016 Tuesday, June 13, 2017 Douglas Karr
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ekwusara na ọwa vidiyo ndị ọzọ dịka Vimeo ma ọ bụ Wistia, ọ ka bụ nnukwu omume iji bipụta ma ebuli azụmahịa gị 'Youtube ọnụnọ. Youtube na-aga n'ihu na ndu ya dị ka igwe nyocha nke abụọ kachasị dị ka ndị ọrụ nyocha ihe ha zụrụ ọzọ ma ọ bụ chọpụta otu esi eme ihe n'ịntanetị.
Youtube na-abụbu vidiyo nkekọrịta vidiyo na 2006, ndị mmadụ na-ekerịta nwamba ha na vidiyo vidio na-atọ ọchị. Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, ịme vidiyo na Youtube bụ ọrụ oge niile maka ọtụtụ ndị okike. Nke mere na Youtube abughizi webụsaịtị, ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ndị ama ama ha, nzukọ kwa afọ, na onyinye ngosi. WeAreTop 10
Ndị a bụ ụfọdụ ọnụọgụ dị ịtụnanya na Youtube, emelitere maka 2016
Youtube Iru - # Youtube nwere ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị niile nọ na --ntanetị - kwa ụbọchị ndị mmadụ na-ekiri ọtụtụ narị nde awa na Youtube ma mepụta ọtụtụ ijeri echiche.
Youtube Millennial iru - Youtube n'ozuzu, na ọbụlagodi #Youtube na ekwentị ruru ụmụaka 18-34 na 18-49 karịa netwọ USB ọ bụla na US
Youtube Global Nweta - # Youtube amalitela nsụgharị mpaghara na ihe karịrị mba 88 na asụsụ 76 dị iche iche (na-ekpuchi 95% nke ọnụ ọgụgụ Internetntanetị).
Youtube Mobile Iru - Ozugbo ndị ọrụ nọ na Youtube, ha na-etinyekwu oge kwa oge na-ele vidiyo. Na ekwentị, nkezi oge ikiri #Youtube dị ugbu a karịa nkeji 40 na ihe karịrị ọkara nke echiche # Youtube si na ngwaọrụ mkpanaka.
Etu esi edozi Youtube Channel maka Azụmaahịa
Ihe omuma ihe omuma a na-ejeghari gi site na isi uzo di iche ichota otu ị gha agha n’ile anya ma tinye ndi na-ege gi nti, aha na imepụta owa gi, zuta ihe di nma na ihe vidiyo, meputa ihe vidiyo, kwalite ọdịnaya ahu, ma nweta onwe gi ma obu gi azụmahịa a ghọtara dị ka onye na-emepụta ọdịnaya Youtube.
Hazie ọwa Youtube gị
Mee ezigbo ọrụ ma ị nwedịrị ike ịmalite ụfọdụ ndenye ego na Youtube! Youtubers nwere ihe ịga nke ọma nwere ike ime n'etiti iri cents na $ 6 kwa echiche 1,000! Ọnụ ọgụgụ nke ọwa na-enweta ọnụọgụ isii kwa afọ na Youtube bụ 50% afọ karịa afọ.
Tags: anyị bụ ndị isi 10Ukpo10youtubeọdịnaya youtubeahia ahia youtubemkpanaka youtubenjikarịcha youtubeọnụ ọgụgụ youtubeatụmatụ youtube
Jun 18, 2016 na 4:30 AM
Ezigbo ihe dị mkpa na dịka i kwuru, ịkpọ aha ọwa nke ọma ebe ndị na-ege ntị nwere ike ịkọwa onwe ha dị mkpa. Anyị na-achọ ịmalite Digital Marketing na SEO vidiyo nkuzi nkuzi vidiyo ma na-atụ anya ịtụle miri emi na nke ọ bụla ị tụrụ ebe a, ọ bụ ezie na ebumnuche anyị bụ isi na channelụ Youtube / vidiyo ga-adịtụ iche. Daalụ maka ibipụta post a na ihe ngosi.